အာရုံကွောအားနညျးနမှေနျး ဘယျလိုသိနိုငျမလဲ? – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
▪လူတဈယောကျကို စကျတဈလုံးလို မွငျကွညျ့မယျဆို အာရုံကွောတှကေိုလညျး လြှပျစဈဝိုငျယာကွိုးတှေ.. အငျတာနကျဖိုငျဘာကွိုးတှလေိုပဲလို့ တငျစားလို့ရပါတယျ။
▪လူတဈယောကျရဲ့ အထိအတှေ့၊ အပူ၊နာကငျြမှု၊ တုနျခါမှု စတဲ့ အာရုံခံမှု အာရုံသိမှုတှကေစလို့ နှလုံးခုနျနှုနျး..သှေးပေါငျခြိနျမှနျကနျဖို့.. တညျတညျငွိမျငွိမျ လှုပျရှားသှားလာနိုငျဖို့အထိကို ဒီအာရုံကွောတှကေနတေဈဆငျ့ ဦးနှောကျနဲ့ ကိုယျခန်ဓာ အစိတျအပိုငျးတှကွေား အပွနျအလှနျ သတငျးပေးပို့ ဆကျသှယျဆောငျရှကျပေးရပါတယျ။
▪လူတဈယောကျ ခွလေကျထုံကဉျြတာဖွဈရငျ အာရုံကွောအားနညျးနတောလို့ အလှယျတကူပွောတတျကွပမေဲ့ တကယျတော့ အာရုံကွောအားနညျးခွငျးရဲ့ လက်ခဏာတှဟော ထုံတာ ကဉျြတာထကျ အမြားကွီးပိုပါသေးတယျ။
▪ဦးနှောကျနဲ့ spinial cord ဆိုတဲ့ အာရုံကွောမကွီးကနေ သဈပငျအမွဈတှလေို တဈကိုယျလုံးကို ဖွာဆငျးသှားတဲ့ အာရုံကွောတှကေို အလုပျအပျေါမူတညျပွီး (၃)မြိုးခှဲနိုငျပါတယျ။
ဒီကှဲပွားမှုအပျေါမူတညျပွီး အာရုံကွောအားနညျးရငျ ဖွဈတတျတဲ့ လက်ခဏာတှလေညျး အမြိုးမြိုးကှဲပွားသှားတာပေါ့။
(၁) Sensory Nerves တှေ အားနညျးလာရငျ ဘာလက်ခဏာတှပွေမလဲ ??
ဒီအာရုံကွောတှရေဲ့ အဓိကတာဝနျက အာရုံခံမှု အာရုံသိမှုတှအေတှကျဖွဈပါတယျ။ အထိအတှေ့၊ အပူ၊ အအေး၊ အရသာ၊ နာကငျြမှု၊ တုနျခါမှု စတာတှေ အားလုံးကို သိရှိခံစားနိုငျစဖေို့ ဒီ Sensory Nerves တှေ မခြို့ယှငျးဖို့ လိုပါတယျ။ ဒီအာရုံကွောတှေ အားနညျးတာက ပိုအဖွဈမြားသလို လူသိမြားတဲ့ လက်ခဏာတှလေညျး ဖွဈပါတယျ။
– ထုံ/ကဉျြ တာတှေ ဖွဈလာမယျ။ ခွဖြေားလကျဖြားတှကေနေ စထုံကဉျြလာတတျပွီး တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ခန်ဓာကိုယျ အပျေါပိုငျးတှကေိုပါ ပွနျ့လာတတျတယျ။
-အပျနဲ့ ထိုးသလို မီးစလေး ထိသလို စူးခနဲ ဖွဈဖွဈသှားတတျပါတယျ။ တဆဈဆဈနဲ့ မခံနိုငျအောငျ ကိုကျနတောမြိုးဖွဈတတျပါတယျ။
– ပုံမှနျထကျပိုပွီးနာကငျြတာမြိုးဖွဈတတျသလို နညျးနညျးထိပမေဲ့ မြားမြားသိနတောမြိုးလညျး ဖွဈတတျပါတယျ။
– တညျတညျငွိမျငွိမျ မလှုပျရှားနိုငျဘဲ ယိုငျထိုးနတောမြိုး မကွာခဏ ပွုတျကလြှယျတာမြိုးလညျး ဖွဈတတျပါတယျ။
– ခွထေောကျတှေ ထုံပွီး နာကငျြမှုကို သိပျမသိတာကွောငျ့ ခလုပျတိုကျ၊ ဆူးစူး စတဲ့ အနာသေးသေးလေးတှကေို သတိမထားမိဘဲ ဖွဈနတေတျတယျ။
အထူးသဖွငျ့ ဆီးခြိုရောဂါကွောငျ့ အာရုံကွောတှထေိခိုကျတဲ့အခါ အနာမကကျြလို့ ခွထေောကျဖွတျရတဲ့ အထိ အန်တရာယျကွီးတတျပါတယျ။
– နာကငျြမှုကို မခံစားရတဲ့ အတှကျ နှလုံးသှေးကွောပိတျတဲ့ အခွအေနမြေိုးမှာတောငျ ရငျဘတျထူးထူးခွားခွား မအောငျ့ဘဲ အသကျအန်တရာယျဖွဈရတာမြိုးတှလေညျး ရှိပါတယျ။
(၂) Motor Nerves တှေ အားနညျးလာရငျ ဘာလက်ခဏာတှပွေမလဲ ??
ဒီအာရုံကွောတှကေတော့ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ကွှကျသားလှုပျရှားမှုတှကေို အဓိက ထိနျးခြုပျရပါတယျ။ ဒီတော့ ဒီ motor nerves တှေ အားနညျးလာတဲ့အခါ ခွလေကျ လေးလံတာတှေ.. သှားလာလှုပျရှားရ ခကျခဲလာတာတှေ.. ခြိနဲ့လာတာမြိုးတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။
(၃) Autonomic Nerves တှေ အားနညျးလာရငျ ဘာလက်ခဏာတှပွေမလဲ ??
ဒီအာရုံကွောတှကေတော့ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ နှလုံးခုနျနှုနျး၊ သှေးပေါငျခြိနျ၊ အစာခွစေနဈ၊ ဆီးအိမျ စတာတှကေို ထိနျးညှိပေးတဲ့ အလုပျ လုပျရပါတယျ။ ဒီအာရုံကွောတှထေိခိုကျလာရငျ ခန်ဓာကိုယျအတှငျးပိုငျး ကလီစာတှကေို ပိုထိခိုကျမယျလို့လညျး ဆိုနိုငျပါတယျ။ အဖွဈမြားတဲ့ လက်ခဏာတှကေတော့
– သှေးပေါငျခြိနျ တကျလိုကျကလြိုကျ ဖွဈတတျပွီး မကွာခဏ ခေါငျးမူး ခေါငျးမကွညျတာ ဖွဈတတျပါတယျ။
– အပူဒဏျမခံနိုငျတာ..ခြှေးအရမျးထှကျတာ ဖွဈတတျသလို ခြှေးလုံးဝမထှကျတတျတာမြိုးလညျး ဖွဈတတျပါတယျ။
– ဆီးဝမျးမထိနျးနိုငျတာမြိုးတှေ ဖွဈတတျပွီး အစာကွဖေို့မလှယျတာ ဝမျးခြုပျတာစတဲ့ ပွဿနာမြိုးတှလေညျး ဖွဈတတျပါတယျ။
ကိုယျ့ကိုယျကို အာရုံကွော အားနညျးနပွေီထငျရငျတော့ ဆရာဝနျနဲ့ ပွသ တိုငျပငျပွီး စောစောစီးစီး ကုသမှု ခံယူဖို့လိုသလို ဘာကွောငျ့ အာရုံကွောအားနညျးတယျဆိုတာကိုလညျး အဖွရှောဖို့ လိုပါလိမျ့မယျ။
▪လူတစ်ယောက်ကို စက်တစ်လုံးလို မြင်ကြည့်မယ်ဆို အာရုံကြောတွေကိုလည်း လျှပ်စစ်ဝိုင်ယာကြိုးတွေ.. အင်တာနက်ဖိုင်ဘာကြိုးတွေလိုပဲလို့ တင်စားလို့ရပါတယ်။
▪လူတစ်ယောက်ရဲ့ အထိအတွေ့၊ အပူ၊နာကျင်မှု၊ တုန်ခါမှု စတဲ့ အာရုံခံမှု အာရုံသိမှုတွေကစလို့ နှလုံးခုန်နှုန်း..သွေးပေါင်ချိန်မှန်ကန်ဖို့.. တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်ဖို့အထိကို ဒီအာရုံကြောတွေကနေတစ်ဆင့် ဦးနှောက်နဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်းတွေကြား အပြန်အလှန် သတင်းပေးပို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးရပါတယ်။
▪လူတစ်ယောက် ခြေလက်ထုံကျဉ်တာဖြစ်ရင် အာရုံကြောအားနည်းနေတာလို့ အလွယ်တကူပြောတတ်ကြပေမဲ့ တကယ်တော့ အာရုံကြောအားနည်းခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေဟာ ထုံတာ ကျဉ်တာထက် အများကြီးပိုပါသေးတယ်။
▪ဦးနှောက်နဲ့ spinial cord ဆိုတဲ့ အာရုံကြောမကြီးကနေ သစ်ပင်အမြစ်တွေလို တစ်ကိုယ်လုံးကို ဖြာဆင်းသွားတဲ့ အာရုံကြောတွေကို အလုပ်အပေါ်မူတည်ပြီး (၃)မျိုးခွဲနိုင်ပါတယ်။
ဒီကွဲပြားမှုအပေါ်မူတည်ပြီး အာရုံကြောအားနည်းရင် ဖြစ်တတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေလည်း အမျိုးမျိုးကွဲပြားသွားတာပေါ့။
(၁) Sensory Nerves တွေ အားနည်းလာရင် ဘာလက္ခဏာတွေပြမလဲ ??
ဒီအာရုံကြောတွေရဲ့ အဓိကတာဝန်က အာရုံခံမှု အာရုံသိမှုတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အထိအတွေ့၊ အပူ၊ အအေး၊ အရသာ၊ နာကျင်မှု၊ တုန်ခါမှု စတာတွေ အားလုံးကို သိရှိခံစားနိုင်စေဖို့ ဒီ Sensory Nerves တွေ မချို့ယွင်းဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီအာရုံကြောတွေ အားနည်းတာက ပိုအဖြစ်များသလို လူသိများတဲ့ လက္ခဏာတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
– ထုံ/ကျဉ် တာတွေ ဖြစ်လာမယ်။ ခြေဖျားလက်ဖျားတွေကနေ စထုံကျဉ်လာတတ်ပြီး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အပေါ်ပိုင်းတွေကိုပါ ပြန့်လာတတ်တယ်။
-အပ်နဲ့ ထိုးသလို မီးစလေး ထိသလို စူးခနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ တဆစ်ဆစ်နဲ့ မခံနိုင်အောင် ကိုက်နေတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။
– ပုံမှန်ထက်ပိုပြီးနာကျင်တာမျိုးဖြစ်တတ်သလို နည်းနည်းထိပေမဲ့ များများသိနေတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
– တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် မလှုပ်ရှားနိုင်ဘဲ ယိုင်ထိုးနေတာမျိုး မကြာခဏ ပြုတ်ကျလွယ်တာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
– ခြေထောက်တွေ ထုံပြီး နာကျင်မှုကို သိပ်မသိတာကြောင့် ခလုပ်တိုက်၊ ဆူးစူး စတဲ့ အနာသေးသေးလေးတွေကို သတိမထားမိဘဲ ဖြစ်နေတတ်တယ်။
အထူးသဖြင့် ဆီးချိုရောဂါကြောင့် အာရုံကြောတွေထိခိုက်တဲ့အခါ အနာမကျက်လို့ ခြေထောက်ဖြတ်ရတဲ့ အထိ အန္တရာယ်ကြီးတတ်ပါတယ်။
– နာကျင်မှုကို မခံစားရတဲ့ အတွက် နှလုံးသွေးကြောပိတ်တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာတောင် ရင်ဘတ်ထူးထူးခြားခြား မအောင့်ဘဲ အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်ရတာမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။
(၂) Motor Nerves တွေ အားနည်းလာရင် ဘာလက္ခဏာတွေပြမလဲ ??
ဒီအာရုံကြောတွေကတော့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုတွေကို အဓိက ထိန်းချုပ်ရပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီ motor nerves တွေ အားနည်းလာတဲ့အခါ ခြေလက် လေးလံတာတွေ.. သွားလာလှုပ်ရှားရ ခက်ခဲလာတာတွေ.. ချိနဲ့လာတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
(၃) Autonomic Nerves တွေ အားနည်းလာရင် ဘာလက္ခဏာတွေပြမလဲ ??
ဒီအာရုံကြောတွေကတော့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်း၊ သွေးပေါင်ချိန်၊ အစာခြေစနစ်၊ ဆီးအိမ် စတာတွေကို ထိန်းညှိပေးတဲ့ အလုပ် လုပ်ရပါတယ်။ ဒီအာရုံကြောတွေထိခိုက်လာရင် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်း ကလီစာတွေကို ပိုထိခိုက်မယ်လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အဖြစ်များတဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့
– သွေးပေါင်ချိန် တက်လိုက်ကျလိုက် ဖြစ်တတ်ပြီး မကြာခဏ ခေါင်းမူး ခေါင်းမကြည်တာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
– အပူဒဏ်မခံနိုင်တာ..ချွေးအရမ်းထွက်တာ ဖြစ်တတ်သလို ချွေးလုံးဝမထွက်တတ်တာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
– ဆီးဝမ်းမထိန်းနိုင်တာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပြီး အစာကြေဖို့မလွယ်တာ ဝမ်းချုပ်တာစတဲ့ ပြဿနာမျိုးတွေလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အာရုံကြော အားနည်းနေပြီထင်ရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသ တိုင်ပင်ပြီး စောစောစီးစီး ကုသမှု ခံယူဖို့လိုသလို ဘာကြောင့် အာရုံကြောအားနည်းတယ်ဆိုတာကိုလည်း အဖြေရှာဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။